Mormiin hawaasaa haarayoomuu heeyyama MIDROC GOLD Laga-danbiitiin wal qabatee guyyaa kaleessaa eegale har'as cimee itti fufeera. - OMN
OMN:Caamsaa – 01/2018
Hayyamni Albuuda Warqee Laga-danbii Dhaabbata MIDROC GOLD, Waggoota 10’f kan haaromfameef ta’uun mirkanaa’eera.
Hayyamni kun haaromfamuun wal qabatee ammoo Mormiin hawaasaa Godina Gujiitti bifa haaraan dhoheera.
Maddi rakkoo ammas sirna biyya bulchuudha jedhan Maanguddoonnii fi Abbootiin Gadaa Godina Gujii.
Rakkoon Dhaabbanni MIDROC dhaqqabsiisaa jiru daran hammaataa ta’uun osoo beekamuu, komii fi mormii hawaasa tarkaanfatanii hayyama dhaabbatichaa haaromsuun, balaa caalu hordofsiisuu akka danda’u hubachiisaniiru.
Gaaffii hawaasni kaasuuf hanga ammaatti deebiin gama mootummaatiin kenname hin jiru kan jedhan Abbootiin Gadaa Godina Gujii,
Hayyamni dhaabbata MIDROC’f kenname haaromfamuun erga mirkanaa’ee as ammoo mormiin hawaasaa daran hammaachuu eeraniiru.
Keemikaala Haayidirojiin Saanaayidii Dhaabbanni MIDROC fayyadamuun walqabatee, faalamni naannoo mudachuu, rakkoon hawaasa naannoo mudataa jiru hammaataa ta’uun hubatamee, walii galteen dhaabbatichaa addaan cituu akka qabuuf kanaan dura marii yeroo garaa garaatti qaamolee mootummaa faana taasime irratti walii galteerra ga’amee turuu dubbatu jiraataan Godina Gujiirraa dubbifne kan biroon.
Haa ta’u malee Mootummaan waadaa hawaasaaf seene kabajuu hin dandeenye, walii galteen waggoota kudhanii dabalataan haaromfamuun uummata naannoo haalaan mufachiiseera, mormiin hawaasaas guyyaadhaa gara guyyaatti hammaataa jira jedhan.
Har’as magaalotaa fi Aanaalee Godinichaa garaa garaatti hiriirri mormii fi daandii cufuun itti fufuusaa ibsaniiru.
Aanaa Gooroo Doolaa Magaalaa Haraqallootti mormiin hawaasa guyyaa lammataaf itti fufeera. Daandii guddicha Finfinnee- Negeellee geessuu dabalatee, daandiiwwan magaalaa Haraqalloo keessa qaxxaamuran biroon iddoowwan garaa garaatti Qeerroon cufamuun isaaniis beekameera.
Magaalaa Shaakkisoo fi naannoo isheettis mormiin hawaasaa itti fufuusaa odeeffannoo arganne ni mul’isa.
Mormii magaalaa Shaakkisoo kana irrattis jaarsolii biyyaa dabalatee qaamoleen hawaasaa garaa garaa hirmaachuufi, pirezedaantiin Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas ta’e Ministirri Muummee Dr Abiy Ahimad, qaamaan bakkichatti argamanii miidhaa hawaasa mudataa jiru akka mil’ataniif gaafataa turaniiru.
Mormii magaalaa Shaakkisootii dhaga’amaa jiru kanaan wal qabatee humnoonni tikaa jiraattota reebuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuus maddeen Odeeffannoo keenyaa mirkaneessaniiru.
Mootummaan Itiyoophiyaa hatattamaan walii galtee MIDROC’f haaromse akka haqu,
MIDROC GOLD Miidhaa daa’imman, haadholii, horii, bineensa bosonaa, fi naannoo irratti woggoota digdamaaf dhaqqabsiisaa tureef itti gaafatamummaa akka fudhatu gaafataa jiru Qeerroon Godinichaa. Miidhaa dhaqqabeef Beenyaan gahaan kanfalamuu akka qabus gaafataniiru.
Warqeen Laga-danbii barootaaf alagaan saamamaa ture ammaan booda kan Uummataa ta’uu qaba kan jedhan Qeerroon Godina Gujii, Uummanni Oromoo ijaaramee dhaabbata mataasaa irratti hundeeffachuun qabeenya dachee Oromiyaa abbummaan misoomsee irraa fayyadamuu akka qabuuf hubachiisaniiru.
Mootummaan hatattamaan hayyama dhaabbatichaaf haaromse haqee tarkaanfilee barbaadaman fudhachuu baannaan mormiin eegalame cimee bifa garaa garaan kan itti fufu ta’uus ibsaniiru.
Dhimmichi kan hawaasa godinichaa qofa waan hin taaneef Uummanni Oromoo marti miira tokkoon gochicha dura dhaabbachuu akka qabuufis waamicha dhiyeessaniiru.
Walii galteen MIDROC haaromfamuun battala dhaga’amerraa kaasee Hayyoota, Barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo fi Qeerroo magaalota Oromiyaa biroo birattis mormii hordofsiisaa jiraachuun ni beekama.
OMN: MILL’UU TIBBANAA